मनोरञ्जन Archives - Page9of 10 - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मनोरञ्जन Archives - Page9of 10 - खबर प्रवाह
वर्ष ०७५ मा नेपाली फिल्म उद्योग– भारतीयदेखि टर्किस फिल्मबाट हुबहु चोरी !
काठमाडौं – यस वर्षको शुरुवातसम्म फिल्म ‘शत्रु गते’ कै चर्चा थियो । किनकि, यो फिल्मले वर्षको अन्ततिर आउँदा बक्स अफिसमा गज्जबको व्यापार गरेको थियो । हलमा दर्शक तान्न सफल बनेको थियो फिल्म । नयाँ वर्षको शुरुवातमा नयाँ फिल्मले भने दर्शकको ध्यानसमेत तान्न सकेका थिएनन् । यद्यपि केही फिल्मले राम्रै हल्ला मच्चाइरहेका थिए । वैशाखको शुरुवातदेखि […]
अक्षय कुमारको ‘केसरी’ ले २० दिनमा कति कमाइ गर्‍यो ?
मुम्बई – भारतीय अभिनेताअक्षय कुमारको फिल्म ‘केसरी’ ले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गरेको छ । फिल्मले अहिलेसम्म पनि सिनेमा घरमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । रिलिजको २० दिनमा फिल्मले १ सय ४५ करोड कमाएको बक्स अफिसको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । यो फिल्मले पहिलो हप्ता नै १ सय करोडभन्दा बढी कमाएको थियो […]
मुम्बई – भारतको चर्चित शो ‘सास बिना ससुराल’ बाट भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रियता कमाएकी कलाकार ऐश्वर्या सखुजा पछिल्लो समय टिभीको दुनियाँबाट गायब छिन् । उनी यसरी गायब हुनुको कारण काम नपाउनु थिएन । बरु ऐश्वर्याले यो ब्रेकको कारण ‘नागिन’, ‘दिव्य दृष्टि’, ‘सितारा’ जस्ता सुपर नेचुरल शो रहेको बताएकी छिन् । ऐश्वर्याले एक अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘सुपर नेचुरल […]
वर्षका यी १२ फिल्म – जसले ‘हाइप’ बनाए तर ‘फ्लप’ भए
काठमाडौं – यस वर्ष रिलिज भएका फिल्ममध्ये धेरै फिल्म दर्शकलाई यादसमेत छैन । औसत रुपमा हप्तामा दुईवटा फिल्म रिलिज हुँदा सम्रग फिल्म क्षेत्रले नै घाटाको व्यापार गरेको छ । यस वर्ष रिलिज भएका‍/हुने ९६ वटा फिल्मका नाम र रिलिज मिति त धेरै दर्शकलाई थाहा छैन । तर, दर्शक जानकार भएका केही फिल्मले राम्रो हाइप बनाएर […]
‘कालो वर्ष’को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौं– चलचित्र ‘कालो वर्ष’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । आगामी बैशाख १३ गते प्रर्दशनमा आउने उक्त चलचित्रको आज (मंगलबार) एक कार्यक्रम का बीच टिजर सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रमा दैविक प्रकोपको कारण भोग्नु पर्दाको समस्याहरुलाई उजागर गरिएको कलाकार पवन भट्टराईले जानकारी दिए । लक्षु गौतमले निर्देशन गरेको चलचित्रमा ओकेश पनेरु, अनुपा खड्का र पवन भट्टराईको […]
प्रकाश सपूत भन्छन् – ‘दोहोरी ब्याटल २’ बलिउड/हलिउडका गीत सुन्नेका लागि
काठमाडौं – गीत ‘बोल माया’ गाएर धेरै स्रोताको आदर्श बनेका प्रकाश सपूतले सो गीतभन्दा केही महिना पहिले ‘दोहोरी ब्याटल’ सार्वजनिक गरेका थिए । सो गीत रिलिज भएपछि लोकगीतमा विकृति भएको भन्दै सपूतको विरोध भयो । ‘बोल माया’ पछि सपूतलाई सिरियस लोकगीतका दर्शक तथा स्रोताले निकै सम्मानका साथ हेरे । यतिबेला भने उनले ‘दोहोरी ब्याटल २’ […]
विष्णु माझी र सन्दीपको ‘लालुमै’ करोड क्लबमा प्रवेश
काठमाडौं – गायक सन्दिप न्यौपाने र विष्णु माझीको स्वर रहेको लोकगीत ‘लालुमै’ करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । पछिल्लो समयको भाइरल यो लोकगीत छोटो समयमा नै युट्युबमा एक करोड दर्शकले हेरेका हुन् । यो गीतलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । शिव हमालको शब्द तथा संगीत रहेको यो गीतमा प्रेम भावलाई समेटिएको छ । गीतको भिडियोले […]
काठमाडौं – निर्माता दीपकराज गिरी र रोहित अधिकारीको टिमअपमा निर्माण हुन लागेको नयाँ फिल्मको नाम ‘छ माया छपक्कै’ राखिएको छ । निर्माण टिमले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ फिल्मको नाम सार्वजनिक गरेको हो । यो फिल्मको निर्देशन समीक्षक तथा निर्देशक दीपेन्द्र लामाले गर्नेछन् । उनका अनुसार फिल्मको छायांकन बैशाखबाट शुरु हुनेछ भने दशैँमा रिलिज हुनेछ । निर्माण […]
‘क्याप्टेन’ निर्देशक नयाँ स्किृप्टको खोजीमा
काठमाडौं – अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’ व्यावसायिक रुपमा औसत रह्यो । समीक्षात्मक रुपमा फिल्मले नकारात्मक प्रतिक्रिया सहनुप–यो । फिल्मलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका थिए । यो फिल्मबाट निर्देशक भट्टराईले खासै राम्रो प्रतिक्रिया पाएनन् । यतिबेला भने निर्देशक भट्टराईले नयाँ फिल्मका लागि स्किृप्टको खोजी गरिरहेको बताएका छन् । खबरहबसँगको भेटमा निर्देशक भट्टराईले आफूले अब लभस्टोरी […]
शाहरुख खानले छोडे ‘डन ३’
मुम्बई – बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका फिल्मले पछिल्लो समय खासै सफलता पाएका छैनन् । फिल्म ‘जिरो’ को असफलतापछि उनी अघिल्लो प्रोजेक्टलाई लिएर निकै नै सचेत देखिएका छन् । यतिबेला खबर आएको छ कि, आफ्नो हिट फ्रेन्चाइज फिल्म ‘डन ३’ बाट शाहरुखले हात झिकेका छन् । निर्माताले यो फिल्ममा शाहरुख खानको ठाउँमा रणवीर सिंहलाई लिने योजना […]
‘ए मेरो हजुर ३’ को लिरिकल गीत सार्वजनिक
काठमाडौं – फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ को लिरिकल गीत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रताप दासको आवाजमा रहेको ‘सत्य भन्छु’ बोलको गीत युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा रवि मल्लका शब्द छन् भने कल्याण सिंहको संगीत छ । यस्तै गीतमा उदयराज पौडेलको एरेन्ज छ । सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा अनमोल केसी, सलोन बस्नेत, […]
‘यात्रा’ को अफर – ट्रेलर हेरेर एक लाख जित्ने मौका
काठमाडौं – फिल्म ‘यात्रा’ युनिटले चलचित्रको ट्रेलर हेरेर उत्तर मिलाउने दर्शकलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । निर्माण टिमका अनुसार दर्शकले ट्रेलर हेरेर यात्रा फिल्मकी पात्र तपस्याले कसरी आँखा गुमाइन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पठाएर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । सहभागीले भाग लिनका मेरो मकै डट कम क्लिक गर्न सक्नेछन् । यो फिल्म […]
दयाहाङको ‘दयारानी’ हङकङमा प्रदर्शन गरिने
काठमाडौं – दयाहाङ राई अभिनित फिल्म ‘दयारानी’ हङकङमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका गरीब, असहाय तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहयोग जुटाउने उद्देश्यले च्यारिटी शो गर्न लागिएको हो । नेपालमा जेठ १० गतेदेखि रिलिज हुने यो फिल्म हङकङमा भने ३० जुन अर्थात् असार १५ मा च्यारिटी शो गरिनेछ । निर्माण टिमले ‘शो’बाट उठेको पूरै […]
म्युजिक भिडियोमा दिलिप र मरिष्का
काठमाडौं – गायक शंकरलाल श्रेष्ठले नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । ‘माया त लाउने हो’ बोलको लोकपप शैलीको गीतलाई आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरिएको हो । सेलिब्रेटी नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिने उक्त भिडियोमा दिलिप रायमाझी र मरिष्का पोखरेलको अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतमा दयाराम दाहालको शब्द र संगीत छ […]
प्रदीप जी, अब त सोच्नैपर्ने बेला आएन र ?
काठमाडौं – अभिनेता प्रदीप खड्कालाई चकलेटी र हलमा दर्शक ल्याउने ल्याकत भएका कलाकार भनेर धेरैले उचाले । चलचित्र ‘प्रेमगीत’ र ‘प्रेमगीत २’ ले व्यावसायिक रुपमा सफलता हासिल पनि गरे । त्यसपछिका उनका फिल्मले भने खासै कमाल गर्न सकेका छैनन् । यसअघि उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘रोज’ पनि व्यावसायिक रुपमा असफल भएपछि प्रदीप खड्काले मिडियामा केही […]
आमाको ‘बाटो’मा छोरी- ‘फ्यान’को प्रतिक्रियाले मख्ख सुहाना !
काठमाडौं- फिल्म ‘ए मेरो हजुर’ लाई सुनीलकुमार थापाले निर्माण गर्ने भए । निर्देशकको कमाण्ड सम्हालेका थिए दिवङ्गत निर्देशक शिव रेग्मीले । हिरोमा दिवङ्गत श्रीकृष्ण श्रेष्ठ तय भएका थिए । निर्देशक रेग्मीले सिनेमामा कसलाई नायिका लिने भन्नेमा मन डुलाइरहेका थिए । रेग्मीको रोजाइमा त्यतिबेलाका चल्तीका नायिकाहरु जल शाह, निरुता सिंहहरू थिए । अझ रेग्मीले त निरुता […]
फेरि दोहोरिँदै रणवीर–आलिया ?
काठमाडौं – केही समय पहिले फिल्ममेकर करण जोहरले आफ्नो फिल्म ‘तख्त’ को स्टारकास्ट घोषणा गरेका थिए । जब यो कुरा सार्वजनिक भयो, त्यतिबेला नै रणवीर सिंह र आलिया भट्टलाई एकसाथ देखिने कुरा बाहिरिएको थियो । यो खबरले फ्यान पनि निकै उत्साहित थिए । भारतीय मिडियाका अनुसार यी दुवै एकअर्काको अपोजिटमा हुने छैनन् तर दुवै फिल्म […]
टी सिरिजमा पहिलोपटक नेपाली ब्याण्डको भजन
काठमाडौं – नेपाली ब्याण्ड सत्याकृतको गीत ‘जय देवी जय’ सार्वजनिक गरिएको छ । भक्ति संगीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको यो ब्याण्डको गीत भारतीय स‌ंगीत कम्पनी टी सिरिजमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सकल्य देवको शब्दमा प्रजित लामाको संगीत तथा स्वर रहेको यो गीत ‘जय देवी’ एल्बममा समावेश छ । गीतको भिडियोमा सकल्य देवको निर्देशन देख्न […]
झरनाले भनिन् – ‘यात्रा’ टिम किन जुध्न आयो, अचम्म लाग्छ
काठमाडौं – आउँदो शुक्रबारबाट ‘ए मेरो हजुर ३’ र ‘यात्रा’ रिलिज हुँदैछन् । दुवै फिल्म यस वर्षका प्रतीक्षित फिल्म हुन् । फिल्मको चर्चा त एकातिर छ । अर्कातिर दुई फिल्म एकसाथ रिलिज हुने भएपछि नेपाली फिल्मका कोर दर्शकहरु दुःखी छन् । किनकि, दर्शक चाहन्छन् – सबै फिल्म चल्नुपर्छ । फिल्मले राम्रो व्यापार गर्नुपर्छ । यसैबीच […]
वर्षाको बर्थ डे सेलिब्रेसन – पशुपति पुगेर दिइन् बाँदरलाई बिस्कुट
काठमाडौं – ‘पशुपतिप्रसाद’ गर्ल वर्षा शिवाकोटीले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गरेकी छिन् । उनले जन्मदिनमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अनाथ व्यक्ति र बाँदरलाई बिस्कुट वितरण समेत गरेकी छिन् । उनले जन्मदिनका यी तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी छिन् । पछिल्लो समय ‘वीर विक्रम २’ मा व्यस्त यी नायिका यतिबेला फिल्मकै प्रचारमा छिन् । […]
समाचार कोरोना संक्रमित मनोज गजुरेलको अवस्था गम्भीर, आईसियूमा उपचार हुँदै
समाचार कपिल शर्मा दोस्रो पटक बुवा बन्दै
बलिउड/हलिउड भारती सिंह र उनका श्रीमान् जमानतमा रिहा
बलिउड/हलिउड भारती सिंहको जमानत खारेज गर्न एनसीबीको अपिल